Vaovao - pejy 25 amin'ny 30 - DataNumen
Home > Vaovao (Page 25)
DataNumen Exchange Recovery 3.0 dia navoaka tamin'ny 12 Aogositra 2010
Hatsarao ny fahombiazan'ny motera fanarenana.
Hatsarao ny fomba fitiliana ny lesoka sy ny fikarakarana.
Hatsarao ny bara fandrosoana mba hanehoana tsara ny fandrosoana fanarenana.
Tohano ny Microsoft Exchange 2010 sy ny Outlook 2010.
Amboary ny bibikely madinidinika.
DataNumen Outlook Repair 3.2 dia navoaka tamin'ny 3 Aogositra 2010
Tohano ny Microsoft Outlook 2010.
DataNumen Outlook Repair 3.1 dia navoaka tamin'ny 18 Mey 2010
Hatsarao ny fikarohana ny lesoka sy ny fiasan'ny tatitra.
DataNumen Office Repair 1.6 dia navoaka tamin'ny 1 aprily 2010
fanavaozana DataNumen Outlook Repair mankany amin'ny andiany 3.0
fanavaozana DataNumen Outlook Express Repair mankany amin'ny andiany 2.1
DataNumen Exchange Recovery 2.5 dia navoaka tamin'ny 24 martsa 2010
Hatsarao ny hafainganam-pandehan'ny scan sy ny sitrana.
Ahenao ny fanjifana fahatsiarovana mandritra ny dingan'ny fanarenana.
Sakano ny famerenana ireo atiny misy duplicate amin'ny fizotran'ny fanarenana.
Fanohanana hamerenana ireo fananana marobe amin'ny zavatra iray amin'ny andiany.
Fanohanana hamerenana amin'ny laoniny sy hanovana ireo fananana sarobidy be.
Hatsarao ny mifanentana amin'ny rafitra Windows 9x.
Hatsarao ny fifanarahan'ny GUI.
DataNumen Outlook Repair 3.0 dia navoaka tamin'ny 18 martsa 2010
DataNumen Outlook Repair 2.5 dia navoaka tamin'ny 10 Febroary 2010
Amboary ny bibikely amin'ny fizarana rakitra lehibe.
DataNumen NTFS Undelete 1.5 dia navoaka tamin'ny 27 Oktobra 2009
Fanohanana amin'ny fanaraha-maso tanteraka ny angon-drakitra kapila mangatsiaka ary hikaroka rakitra voafafa maherin'ny 70 karazana fantatra, amin'ny alàlan'ny fampiasana rafitra manam-pahaizana anatiny izay manana fahalalana betsaka momba ny toetra sy ny firafitry ny karazana rakitra.
Hatsarao ny fizotran'ny fizotran'ny scan.
Navoaka tamin'ny 1.0 Oktobra 21 ny Advanced Outlook Data Recovery 2009
Tohano ny Outlook 97, 98, 2000, 2002, 2003 ary 2007.
Tohano ny Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista ary Windows 7.
Fanohanana hamerenana ireo mailaka, lahatahiry, posts, fanendrena, fangatahana fihaonana, fifandraisana, lisitra fizarana, asa, fangatahana asa, diary ary naoty. Ny fananana rehetra, toy ny foto-kevitra, hatramin'ny, cc, bcc, daty sns.
Fanohanana hamerenana ireo hafatra mailaka ao anaty lahatsoratra tsotra, endrika RTF ary HTML.
Fanohanana amin'ny famerenana ireo fametahana, ao anatin'izany ireo antontan-taratasy sy sary mifampitohy amin'ireo hafatra ary tafiditra ao anaty vatan'ny HTML.
Fanohanana hamerenana ireo zavatra natsofoka, toy ny Excel Worksheets, Word documents, sns.
Tohano hamerenana ireo entana Outlook voafafa, ao anatin'izany ny hafatra mailaka, lahatahiry, posts, fanendrena, fangatahana fihaonana, fifandraisana, lisitra fizarana, asa, fangatahana asa, diary ary naoty.
Tohano hamerenana ireo angona Outlook avy amin'ny kapila na kapila lehibe tahaka ny 16777216 TB (izany hoe 17179869184 GB).
Tohano hanasarahana ny fisie PST ho rakitra kely maromaro.
Fanohanana hamerenana ny angon-drakitra Outlook miaraka amin'ny fiarovana ny teny miafina, na ny encryption azo tsindriana na ny encryption avo (na ny encryption tsara indrindra) dia tohanana. Ny data Outlook dia azo averina na dia tsy manana ny teny miafinao aza ianao.
Fanohanana hamoronana rakitra PST raikitra amin'ny endrika Outlook 97-2002 sy endrika Outlook 2003/2007.
Fanohanana hamerenana ny angona Outlook avy amin'ny karazana kapila na kapila, toy ny kapila mafy, kapila mangirana, kapila misy floppy, Zip kapila, CDROM, sns.
Fanohanana hamerenana ny angon-drakitra Outlook amin'ny karazana rafi-drakitra, toy ny FAT, FAT32, NTFS, Linux Ext2, Linux Ext3, sns.
Fanohanana hamerenana ny angona Outlook avy amin'ny media maloto.
Tohano hamerenana kapila kapila sy kapila.
DataNumen Outlook Express Drive Recovery 1.0 dia navoaka tamin'ny 5 Aogositra 2009
Tohano hamerenana ny kinova Microsoft rehetra Outlook Express mailaka.
Fanohanana mba ho sitrana Outlook Express mailaka avy amin'ny kapila na kapila, toy ny kapila mafy, kapila mangirana, kapila misy floppy, Zip kapila, CDROM, sns.
Fanohanana mba ho sitrana Outlook Express mailaka avy amin'ny haino aman-jery maloto.
Fanohanana hahazoana sitrana amin'ireo kapila na kapila lehibe mitovy amin'ny 16777216 TB (izany hoe 17179869184 GB).
Page 25 ny 30«Voalohany<Previous212223242526272829Manaraka >Last »